लापरवाहीले गइरहेछ सङ्क्रमितको ज्यान « Mechipost.com
लापरवाहीले गइरहेछ सङ्क्रमितको ज्यान
प्रकाशित मिति: १० असार २०७८, बिहीबार ११:३८
पाँचथर, १० असार
जिल्लाको कुम्मायक गाउँपालिका घर भई फिदिममा बस्दै आएका ४५ वर्षीय पुरुषले ज्वरो, रुघाखोकी लगायत स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि गत जेठ ३ गते पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका लागि स्बाव दिए । स्वास्थ्य समस्याले सताइरहेकै थियो, उनी अस्पताल गएनन् । पीसीआरको रिपोर्ट तीन दिन वित्दासमेत आएको थिएन ।
सिकिस्तै विरामी परेपछि जेठ ६ गते दिउँसो उनी पाँचथर जिल्ला अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगे । कोभिड–१९ सँग मिल्ने लक्षण देखिएपछि आकस्मिक कक्षका स्वास्थ्यकर्मीले सोधीखोजी गर्दा उनले स्वाब दिएको पत्ता लाग्यो । हत्तपत्त प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा उनको रिपोर्टबारे खोजी भयो । रिपोर्ट पोजेटिभ रहेको पाइएपछि उनलाई जिल्ला अस्पतालकै अस्थायी कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरियो ।
उनको शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता कमजोर रहेको र फोक्सोमा समस्या देखिएपछि तत्कालै थप उपचारका लागि झापा रेफर गरियो । वीच बाटोमै उनको मृत्यु भयो । “स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपनि ढिला गरी अस्पताल आएकाले उहाँलाई रिकोभर गर्नसक्ने सम्भावना अत्यन्तै कम थिए”, उनी भर्ना भएका बखत आकस्मिक कक्षमा ड्युटीमा रहेका अहेब दीपक अधिकारीले भन्नुभयो, “विरामीको लापरवाहीका कारण गम्भीर समस्या ल्याइसकेकाले केही गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।” फोक्सोमा समस्या रहेका ती सङ्क्रमितलाई मद्यपानले सबैभन्दा बढी समस्या पारेको देखियो ।
तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका घर भई फिदिममा बस्दै आएकी ६५ वर्षीया महिलाको अप्पर ग्यास्ट्रोइन्टेस्नल ब्लिडिङ (यूजीआई) का कारण जेठ २८ गेत पाँचथर जिल्ला अस्पतालमा मृत्यु भयो । जेठ २५ गते गरिएको एण्टिजेन परीक्षणमा उनी सहित उनको परिवारका अन्य सदस्यहरुमा समेत कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेकाले उनी होम आइसोलेसन बस्दै आएकी थिइन् । तर एक्कासी मुखबाट रगत वान्ता गर्ने समस्या देखिएपछि आफन्तले उनलाई अस्पताल पु¥याए । अस्पतालमा उपचारको प्रयास हुँदाहुँदै उनको ज्यान गयो ।
पाँचथर जिल्ला अस्पतालका सिनियर अहेव उमेश शाहका अनुसार यूजीआई ग्यास्ट्रिकको अल्सर भई आन्द्रामा प्वाल परेर नाक वा मुखबाट रगत वान्ता हुने समस्या हो । कोभिड–१९ को सङ्क्रमण जस्ता जटिल स्वास्थ्य समस्या हुँदा यस प्रकारका रोगले ज्यानै जान सक्छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने, खानपान नियमित नहुने, औषधि सेवन नगर्ने, अत्यधिक मद्यपान गर्ने जस्ता कारणले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण देखिएपनि मृत्युको कारण अर्कै रहन जान्छ । मृतक महिलामा पनि यसै प्रकारका समस्या देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरु वताउँछन् ।
कोभिड–१९ सँग मिल्ने लक्षण देखिएका स्वास्थ्य समस्या भएपनि जिल्लाको फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नं. ३ का ६३ वर्षीय पुरुषले परीक्षण गर्न मानेनन् । मृतकका आफन्तहरुले उनकै कारण परिवारका अन्य सदस्यहरुमा समेत सङ्क्रमण फैलिएको भन्दै उनको परीक्षणका लागि स्वास्थ्यकर्मी र जनप्रतिनिधि समेतलाई गुहारे । परिवारका सदस्य, आफन्त तथा स्वास्थ्यकर्मी समेतको आग्रह नमानेका उनमा ज्वरो, रुघाखोकी र झाडापखालाजस्ता समस्या देखिएपछि उपचारका लागि अस्पताल लैजाने तयारी गर्दागर्दै जेठ १६ गते घरमै मृत्यु भयो ।
कोभिड–१९ का लक्षणसँग मिल्ने लक्षण देखिएकाले मृत्युपश्चात उनको एण्टिजेन परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । “विरामीले स्वास्थ्य समस्या नै नबताई, परीक्षण नै नगरी उपचारमा लैजाने कुरा भएन”, फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर कुरुम्बाङले भन्नुभयो, “परीक्षण गर्नै नपाई उहाँको ज्यान गयो ।” परिवारका सदस्यदेखि स्वास्थ्यकर्मी समेतको आग्रह अस्वीकार गरी कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणलाई सामान्य रुघाखोकी ठान्ने प्रवृत्तिले उनको ज्यान गएको स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी वताउँछन् ।
फिदिम नगरपालिका वडा नं. ७ र ८ रानीटारमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण निकै ब्यापक फैलिइरहेको थियो । विवाह, भोज लगायत कार्यहरु रोकिएका थिएनन् । सङ्क्रमण दर उच्च थियो । सबैले परीक्षण गराउन नमान्दा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको थियो । समयमा परीक्षण नगराएका फिदिम–८ का ६० वर्षीय पुरुष सिकिस्त विरामी भई असार १ गते जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भए । तुरुन्तै एण्टिजेन परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आयो । साँझ ६ः३० बजे उनको मृत्यु भयो ।
सोही वडाका दुई जना पुरुषको कोभिड–१९ को लक्षणसँग मिल्ने स्वास्थ्य समस्याका कारण ज्यान गयो । स्थानीय ६२ र ७२ वर्षीय पुरुषको जेठ २१ गते मृत्यु भयो । उद्यपी उनीहरुमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको परीक्षण हुन सकेको थिएन् । वडा कार्यालयले सङ्क्रमण निकै ब्यापक भएको भन्दै परीक्षण गराउन आह्वान गरेको थियो । तर सबै स्थानीयवासी यसमा तयार भएनन् । “गाउँमा सङ्क्रमण फैलिँदै गएपछि सबैलाई परीक्षण गराउन अपील गरेको भएपनि सबैको परीक्षण हुन सकेको थिएन्”, फिदिम–८ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर नेम्वाङले भन्नुभयो, “गाउँमै स्वास्थ्यकर्मीको टोली बोलाएर परीक्षणको प्रवन्ध गरेको थिएँ ।”
परीक्षण नभई एकै दिन एकै वडाका दुई जना पुरुषको मृत्यु भएको घटना सार्वजनिक भयो । कोभिड–१९ का लक्षण देखिएपनि वडाले परीक्षणका लागि गरेको आह्वानमा मृतकहरु सहभागी थिएनन् । मृत्युको घटना सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि तनाब भने वडाध्यक्षलाई आइप¥यो ।
“उहाँहरुको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएन् । तर कोरोनाभाइरससँग मिल्ने लक्षणहरु भने थिए”, वडाध्यक्ष नेम्वाङको गुनासो छ, “परीक्षणका लागि प्रवन्ध गर्दागर्दै उहाँहरुको दुःखद् निधन भयो । मृत्युको कारण अर्कै भएको हुनसक्ने भएपनि समाचारहरु आएपछि हामीले अनावाश्यक तनाब भोग्नुप¥यो ।” वडा कार्यालयले स्थानीय स्तरमै परीक्षणको प्रवन्ध गर्नुका साथै फिदिम गएर परीक्षण गराउन सवारी साधनको प्रवन्ध समेत गरेको थियो । मृतकहरुमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, खोकी लाग्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्याहरु थिए ।
लापरवाही र हेलचेक्र्याइका कारण ज्यान गएका यस्ता कयौँ उदाहरणहरु छन् । यहाँका गाउँ–गाउँमा सङ्क्रमण तीब्र गतिमा फैलिएपनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालनाको अवस्था निकै कमजोर छ । कतिपयले अझसम्म मास्कको प्रयोग गर्न, भौतिक दूरीको पालना गर्न, भीडभाड नगर्न तथा भीडभाडमा नजान मानिरहेका छैनन् । जसकारण एक÷दुई जना सङ्क्रमितका कारण गाउँभरिनै सङ्क्रमण फैलिएका छन् । जिल्लाको हिलिहाङ गाउँपालिका–५ सुभाङमा आयोजना गरिएका दुई वटा बिवाहबाट फैलिएको सङ्क्रमणले उक्त वडाका एक सय ५६ जना तथा वडा नं. ३ का १९ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भयो ।
लक्षण देखिएका कतिपयले मद्यपान गर्ने, कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणलाई मौसमी रुघाखोकीका रुपमा लिने जस्ता समस्याले समयमा सङ्क्रमण फैलने र सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु हुने घटना दोहोरिरहेका छन् । यहाँका बजारी तथा ग्रामीण भेगका कैयौँ सर्वसाधारणले अझैपनि कोरोना परीक्षण गर्न मानिरहेका छैनन् । “सबैलाई परीक्षणका लागि तयार बनाउन सकिएको छैन्”, हिलिहाङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका संयोजक चन्द्रप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, “समुदायमा ब्यापक रुपमा फैलिएको सङ्क्रमण सबैको परीक्षण नगरी नियन्त्रण गर्न सकिदैन् ।” परीक्षण गर्न नमानेकाहरुको कोरोनाभाइरसको लक्षणसँग मिल्ने समस्याका मृत्यु भएका घटनाबाट समेत कतिपयले पाठ सिक्न सकिरहेका छैनन् ।
यस्तै परीक्षण गर्न नमानेका तथा सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरुको आवागमन नियन्त्रण हुन सकेको छैन् । जसकारण सङ्क्रमण नियन्त्रण हुन सकेको छैन् । ४० दिनदेखि निषेधाज्ञा जारी रहेपनि सङ्क्रमित थपिने क्रम रोकिएको छैन् । “चेन ब्रेक हुन नसक्दा सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएको छैन”, मानवअधिकारकर्मी मंगल बेघाले भन्नुभयो, “सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अझै प्रकावकारी चालेर जिल्लावासीको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ ।”
मुख्यतः लापरवाहीकै कारण सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन नसकेको देखिएको छ । जिल्लाका आठ वटै स्थानीय तहहरुले पीसीआर तथा एण्टिजेन परीक्षण गर्न, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्न विभिन्न प्रकारले प्रचार–प्रसार गरी सचेतना फैलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर सरकारी निकायका प्रयासलाई सार्थक बनाउन नागरिक स्तरबाट सहयोग मिलेको छैन् ।
नयाँ भेरिअन्टको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको दोश्रो लहर जिल्लामा सुरुआतमै देखिएको याङवरक गाउँपालिकामा करीब तीन दर्जन स्थानीयमा सङ्क्रमण देखिएपछि एक हप्तासम्म सङ्क्रमित देखिएनन् । गाउँपालिकाले प्रचार–प्रसार र परीक्षणलाई नियमित बनाइरहेकै थियो । तर जेठ तेश्रो सातादेखि सङ्क्रमण ब्यापक भयो । याङवरकमा मात्रै सङ्क्रमितको संख्या १६० कटेको छ ।
यहाँ निषेधाज्ञा जारी हुँदा जम्मा ५७ जना सङ्क्रमित थिए । तर निषेधाज्ञाकै वीच ४० दिनपछि सो सङ्ख्या बढेर १७४८ पुगेको छ । निषेधाज्ञाका समयमा दैनिक औषत ४२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइरहेको छ । हालसम्म जिल्लामा सङ्क्रमण पुष्टि भएका २२ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु दर समेत १.२५ पुगेको छ । “मेरो सूचनामा निषेधाज्ञामा बजार र सवारी मात्रै बन्द भए । फिदिममा तासको मिटिङ चल्यो, जुवाको मिटिङ चल्यो”, नागरिक अगुवा प्रेम ओझाले भन्नुभयो, “सबै ठाउँ परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने जरुरी छ । नागरिक स्वयं सचेत नभई महामारी नियन्त्रणमा आउन सक्दैन् ।”
ओझाका कुरामा स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख नारद सुवेदीको पनि समर्थन छ । “सरकारी निकायका प्रयासले मात्रै महामारी नियन्त्रण हुन सक्दैन्”, सुवेदीले भन्नुभयो, “यसका लागि नागरिक सचेत हुनुपर्छ ।” अधिकांश मृत्युका घटना समेत लापरवाहीकै कारण भएको पाइएको भन्दै उहाँले सचेततापूर्वक सामूहिक प्रयासबाट सङ्क्रमण नियन्त्रण र मृत्युका घटना रोक्नुपर्ने उहाँको राय छ ।